China FB-47 SPLIT SET BOLT (Stabilizer Friction) ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | TRM
Dịka nkwado ala siri ike Split Set Bolt ejiri na ngwa, Dia.47mm C pipe nke ahụ bolt bụ nke kacha gbanye ọkụ na nke ezi uche nke nwere ike ịnye ụzọ zuru oke na nchekwa maka nkwado ala, yabụ ejiri ya mee ihe na ogbunigwe, ọwara mmiri na Agbanyeghị, ka ọ dị ugbu a, ike ihe na njiri mara ya, yana ịdị mma welds n'etiti mgbanaka na eriri C, na -aghọ isi okwu dị mkpa.
Dị ka nnukwu onye nrụpụta na onye na-eweta ngwaahịa Split Set na China, anyị nwere mmekọrịta ogologo oge na imekọ ihe ọnụ na igwe igwe nchara mpaghara anyị nwere ike ịnye anyị akwa dị ike na-ewusi eriri nchara na ọkwa dị ala nke Si na P na ngwa kemịkal. , iji hụ na arụ ọrụ dị mma nke ihe ma hapụ ya ka ọ dabara maka galvanizing iji dowe ezigbo mma mkpuchi mkpuchi zinc.
N'inwe ahụmịhe na teknụzụ ihe karịrị afọ 10 n'ọhịa a, uru anyị PLC-Controled Rollformer na Auto Welders nwere ike hụ na nkewa anyị setịpụrụ iji mezuo ihe chọrọ ọkwa mba ụwa kacha elu, wee nweta otuto maka ịdị mma na ọrụ na-adịgide adịgide. onye na -eweta ngwaahịa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na -egwupụta akụ sitere na mpaghara na mba dị iche iche n'ụwa.
Ogo ọkwá bụ ebe dị oke mkpa maka blọt setịpụrụ nke ga -emetụta arụmọrụ nke bolt mgbe ejiri ya na nkwado ala. Anyị nwere usoro nlebara anya na ịdọ aka na ntị oge niile iji nweta ịdị mma na ịdị mma welds zuru oke, na onye njem ọrụ nwere ihe nnwale nnwale ga -agafe usoro niile iji zere ihe ọghọm ọ bụla na mmepụta.
Galvanizing na Black Split Set Bolt nwere ogologo dị iche iche dị. Emere site na ọkwa dị elu nke ihe nchara, nkewa nkewa anyị nwere ike nweta ezigbo mkpuchi mkpuchi zinc ka ọ nwee arụmọrụ ka mma mgbe ejiri ya na gburugburu na-emebi emebi. Nkwakọba ọkọlọtọ maka FB-47 Split set bolt bụ 150 untis kwa pallet osisi ma ọ bụ igwe.
Nkọwapụta FB-39 SPLIT SET BOLT NA IHE MERE.
Akụkụ Njirimara anụ ahụ Data nka
Ịkpọchi dayameta A 47mm Ike Nweta Nkeji 345 Mpa (120KN) Akwadoro Nkịtị Bit nkịtị 41-45 mm ogologo
Ogologo mkpọchi B 0.9-3.0m Ahụkarị 445Mpa (150KN)
Taper End dayameta C 38mm Tube Ultimate Tensile Ike Nkeji 470 Mpa (160KN) Ahụkarị Ịgbaji Ike 178KN
Taper oghere Wide D 2mm Ahụkarị 530Mpa (180KN)
Ogologo Taper E 100mm Mass kwa Mita 2.71 n'arọ Nkeji Ịgbaji Ike 133KN
Kpọchie oghere Wide F 25mm
Ebe mgbanaka G 8mm Mpaghara Mpaghara Cross 345mm² Anchorage mbido akwadoro Tọn 6-10 (53-89 KN)
Akụrụngwa H 3/3 mm
Mgbanaka Wire Ring I 8mm Oghere Oghere Oghere Ogologo: 43-45.5 mm Mgbatị Axial kachasị Ahụkarị 21% (Thk <16mm)
Oghere Mepere emepe J 6-7 mm ogologo
Koodu Nkọwa Bolt Dayameta Ogologo Imecha elu Ibu Mbukota QTY/pallet Agba mgbanakaID
(mm) (mm) (Eze)
FB47-0900 Gbasaa Bolt 47-900 47 900 Emeghị ọgwụgwọ 2.50 150 -
FB47-1800 Gbasaa Set Bolt 47-1800 47 1800 Emeghị ọgwụgwọ 5.10 150 -
FB47-2100 Gbasaa Bolt 47-2100 47 2100 Emeghị ọgwụgwọ 6.10 150 -
FB47-2400 Gbasaa Bolt 47-2400 47 2400 Emeghị ọgwụgwọ 6.70 150 -
FB47-3000 Gbasaa Bolt 47-3000 47 3000 Emeghị ọgwụgwọ 8.60 150 -
FB47-0900G Gbasaa Bolt 47-900 HDG 47 900 Itinye Hot Galvanized 2.60 150 -
FB47-1800G Gbasaa Set Bolt 47-1800 HDG 47 1800 Itinye Hot Galvanized 5.50 150 Uhie
FB47-2100G Gbasaa Bolt 47-2100 HDG 47 2100 Itinye Hot Galvanized 6.40 150 Agba ndụ ndụ
FB47-2400G Gbasaa Bolt 47-2400 HDG 47 2400 Itinye Hot Galvanized 7.05 150 -
FB47-3000G Gbasaa Bolt 47-3000 HDG 47 3000 Itinye Hot Galvanized 9.00 150 Yellow
FB-47 SPLIT SET BOLT atụmatụ
Ọ bụ akwa tensile mebere, yana ọkwa dị iche iche dị na -adabere na gburugburu ojiji dị iche iche iji chekwaa ọnụ ahịa nkwado ala
Lit Split Set Bolt bụ ụzọ kachasị mfe ma dị irè maka nkwado ala, ọ bụ ahụ C nke na -enye nkwado ala zuru oke ogologo oge ruo oghere, na -ejikọ ya na ntupu na efere iji nweta ngwa ngwa na ezigbo ọrụ nkwado.
● Galvanizing na Bolt Split Set Bolts adịghị agwọ ya dị
Ngwa zuru oke dị
Ọdịdị tubular C nke mgbachi ahụ na-ewepụta mbufe ibu site na nchara gaa n'oké nkume mgbe etinyere ya n'ime oghere pere mpe pere mpe, ma na-ebute mbubata mmịpụta nke ọkpọ si n'olulu ahụ, wee mepụta mgbali radial ogologo zuru oke. banye n'olulu ahụ site n'ịbawanye elu kọntaktị nke nchara na nkume n'ihi ọdịdị tubular ya, na mgbe etinyere n'elu efere ahụ, ọ na -ewepụta ike mkpado megide nkume ahụ. Mgbe achọrọ ikike ibu ibu ọzọ, enwere ike ịgbanye mgbagha esemokwu site na ciment grouts.
Olu akwa na -adọba na njedebe mgbanaka na -enyere aka ịnwale ibu n'oge nrụnye mkpọchi. Enwere ike ịtinye ngwụcha ngwụcha nke mgbachi mgbachi n'ime oghere ndị a gbapuru. Enwere ike itinye mgbachi mgbatị site na aka ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ, dị ka jackdrill, stopa, jumbo bolting, ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ.
Nke gara aga: FB-39 SPLIT SET BOLT (Onye na-ese okwu)
Gbasaa ụlọ ọrụ kpọchiri akpọchi
Gbasaa Setị onye na -emepụta Bolt
Gbasaa Set Bolt Supplier